သတင်း - နံရံအထူနှင့် ပစ္စည်းအဆင့်အလိုက် ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုကို ရွေးချယ်ပါ။
နံရံအထူနှင့် ပစ္စည်းအဆင့်အလိုက် ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုကို ရွေးချယ်ပါ။
ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် Shijiazhuang dong huan malleable iron castings co., ltd သည် ပျော့ပြောင်းနိုင်သော သံထည်ပစ္စည်းများကို တီထွင်ခဲ့သည်။ကုန်ကြမ်း၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အကျဉ်းချုပ်အချို့ရှိသည်။
Casting ၏ C၊ Si၊ CE နှင့် Mg တန်ဖိုးများသည် Cast ၏ အဓိကကျသောအတိုင်းအတာများနှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်။သွန်းလုပ်ခြင်း၏အပိုင်းအရွယ်အစားသည် သတ္တုပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းပုံအား ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အအေးခံနှုန်းကို ပူးတွဲဆုံးဖြတ်စေပြီး သတ္တုပုံသဏ္ဍာန်တည်ဆောက်မှု၏ အအေးခံနှုန်းကို ဆုံးဖြတ်သည်။
ferrite သွန်းသံနှင့် pearlitic သွန်းသံနှစ်မျိုးလုံးသည် Si (Si ၏အကြောင်းအရာကိုပြောင်းလဲခြင်းဆိုသည်မှာ CE ကိုပြောင်းလဲခြင်း) နှင့် MN ကို လိုအပ်သည်။
သွန်းခြင်းများကို ၎င်းတို့၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုအရ အလွှာနှစ်ခုအနက်မှ တစ်ခုအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ပါးလွှာသောနံရံနှင့် ထူထဲသောနံရံအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ရာတွင် ကွဲပြားသောအဆင့်များထုတ်လုပ်ရာတွင် အလိုရှိသောဓာတုပါဝင်မှုရရှိရန် အနည်းဆုံးပါဝင်ပစ္စည်း လေးခုရှိကြောင်း ဆိုလိုသည်။
1. ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ အလေးချိန်ကို ထည့်သွင်းပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ % % ဖြင့် ထုတ်လုပ်သော သွန်းသောသံ၏အလေးချိန်ကို မြှောက်ခြင်းဖြင့် တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။
2. MN ၏အကြောင်းအရာအား နိမ့်သောအဆင့်တွင် တမင်သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် ferrite nodular သံတွင်ပါဝင်မှုနည်းသည့်တိုင် Pearite ထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်နိုင်ပြီး Pearite တွင် MN ပါဝင်မှုမြင့်မားသောကြောင့် MN ကိုခွဲခြားရန်လွယ်ကူစေပါသည်။ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်ပြည့်မီရန် မာကျောစေရန် Cu ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် pearlite သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
3. ဆီလီကွန်ကာဗိုက်ကို သွန်းသောသံဓာတ်တိုးမှုကို လျှော့ချရန်နှင့် မီးဖိုအတွင်းပိုင်းကိုကာကွယ်ရန် (ယေဘူယျထည့်ဝင်သည့်ပမာဏမှာ 0.2%)၊ ၎င်းသည် C နှင့် ဆီလီကွန်အာနိသင်တိုးလာခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
4. စုပ်ယူမှုနှုန်းသည် C နှင့် Si အတွက် အဓိကဖြစ်သည်။
Hose With Coupling, လျောက်ပတ်တယ်။, ဝက်အူဖြင့်ပိုက်ကလစ်, အလူမီနီယမ်ပိုက် တပ်ဆင်မှုများ, American Standard Fittings များ, Hinged Pipe Clamp,